အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ: ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စုပေါင်းတွက်ချက်မှုပလက်ဖောင်း | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အခြား, အတော်ကြာ
ဒီနေ့ကနေနောက်ထပ်အေးမြတဲ့ open source စီမံကိန်းကိုလေ့လာပါမယ် DeFi ကမ္ဘာ့ဖလား ကိုခေါ် "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ".
စကားလုံးများဖြင့် "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ" ၏စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် open source စုပေါင်းကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်း ကတည်ဆောက်ခဲ့သည် DFINITY ဖောင်ဒေးရှင်းအဓိကရင်ဆိုင်ရသောပြproblemsနာအချို့ကိုဖြေရှင်းရန် ရိုးရာအင်တာနက် ဒီနေ့
နှင့်ပုံမှန်အတိုင်း, ၏လက်ရှိခေါင်းစဉ်အပေါ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့မသွားမီ "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ"ကျွန်ုပ်တို့၏သတိပေးချက်သည်ကျိုးနပ်ပါသည် နောက်ဆုံးဆက်စပ် post del DeFi ကမ္ဘာ့ဖလားအလားတူစီမံကိန်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်သည့်ဂြိုဟ်နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့်အတိုင်းအတာဟုခေါ်သည် "Filecoin"။ ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
ဖိုင်များသိမ်းဆည်းထားသည့်သက်တူရွယ်တူကွန်ယက်တစ်ခုသည်ဘဏ္filesာရေးဆိုင်ရာမက်လုံးများဖြင့်ဖိုင်များကိုအချိန်နှင့်အမျှယုံကြည်စိတ်ချစွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ Filecoin ၏မစ်ရှင်သည်လူသား၏သတင်းအချက်အလက်အတွက်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသော၊ အကျိုးရှိပြီးခိုင်မာသောအခြေခံကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
"Filecoin" သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux Distros ကဲ့သို့သော လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသော Operating Systems များပေါ်တွင် DropBox နှင့် Mega ကဲ့သို့စီးပွားဖြစ်၊ တံခါးပိတ်နှင့်စီးပွားဖြစ်ဖြေရှင်းမှုများအပေါ်မှီခိုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သည်။ "
1 အင်တာနက်ကွန်ပြူတာ - လက်ရှိအင်တာနက်ကိုတိုးတက်စေရန်စီမံကိန်း
1.4 ဆက်စပ် cryptocurrency
အင်တာနက်ကွန်ပြူတာ - လက်ရှိအင်တာနက်ကိုတိုးတက်စေရန်စီမံကိန်း
အဆိုပါအညီ DFINITY ဖောင်ဒေးရှင်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်စီမံကိန်းကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြနိုင်သည်။
"ဒီ "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ" လက်ရှိအများသုံးအင်တာနက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် backend software ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်းအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် developer များသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ စီးပွားရေးတွက်ချက်မှုစနစ်များနှင့်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သူတို့၏ကုဒ်များကိုအများပြည်သူသုံးအင်တာနက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်း၊
ထို့ကြောင့်စနစ်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာနှောင့်ယှက်နေသောကြီးလေးသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း၊ လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းခြင်းစသည့်စနစ်များ၏လုံခြုံရေး၊ ကြီးထွားလာနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းများရှိခြင်း အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်း၊ သုံးစွဲသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏အင်တာနက်ကို၎င်း၏ဖန်တီးမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိသောအရင်းအမြစ်များသို့မည်သို့ပြန်ပို့ရမည်ကို”
၎င်း၏ဖန်တီးသူစီမံကိန်းကြောင့်, ထိုယူဆ "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ"aအတွင်းတွင်၎င်း၏ဇာတိဆော့ဝဲ (Operating System + Applications) ကိုလက်ခံသည် မရပ်မနားတောက်ပသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလိုသည်မှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောကွန်ယက်သည် ၄ ​​င်းသည်လုံခြုံမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန် firewall များ၊ backup စနစ်များနှင့် failover များကိုမမှီခိုသောစနစ်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပြီးတော့သူတို့ကဒါကိုသေချာစေတယ်၊ "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ" တိုးတက်လိမ့်မည် အပြန်အလှန်အသုံးပြု ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များအကြား, သူတို့ရဲ့အပြန်အလှန် function ကိုခေါ်ဆိုခအဖြစ်ရိုးရှင်းအောင်။ ထို့အပြင်မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကိုအလိုအလျောက်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ရိုးရာဖိုင်များလိုအပ်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ဒေတာဘေ့စ်ဆာဗာများကဲ့သို့လွတ်လပ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများမရှိဘဲလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဤအရာအလုံးစုံ အားသာချက် ခွင့်ပြုပါ အင်တာနက်ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်များ လုံးဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည်နှင့်ယနေ့လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ မတန်တဆရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အိုင်တီကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ အဘယ်အရာကိုလက်တွေ့တွင်သို့ဘာသာပြန်ဆို:
လူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် SaaS စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ 'ပွင့်လင်းသော' ဗားရှင်းများကိုအင်တာနက်ကိုယ်ထည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
အလားတူပိတ်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများမှကိုင်တွယ်သောအချက်အလက်များကိုကုသမှုတွင်သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုမြင့်မားသောအာမခံချက်များပေးနိုင်သည့်ပွင့်လင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များကိုရယူပါ။
ဘယ်သောအခါမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်း။ မရနိုင်သောအမြဲတမ်း APIs များမှတဆင့်အသုံးပြုသူအချက်အလက်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအခြားအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာမျှဝေပါ။
ငါကပိုတယ် ပလက်ဖောင်းအန္တရာယ် နှင့်ဂေဟစနစ်ကိုတက်ကြွ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်၊ သို့မှသာအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်သက်ရောက်မှုများကိုထုတ်ပေးသည်။ ကမ္ဘာ့အင်တာနက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးများ (GAFAM)စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုပေးသည်။
La DFINITY ဖောင်ဒေးရှင်း ကြောင်းဖော်ပြသည် "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ":
၎င်းသည်အိုင်စီပီ (Internet Computer Protocol) ဟုခေါ်သည့်အဆင့်မြင့်သောဗဟိုမှခွဲထုတ်ထားသောပရိုတိုကောဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလွတ်လပ်သောဒေတာစင်တာများကိုလည်ပတ်နေသောအိုင်စီပီ (Internet Computer Protocol) ဟုခေါ်သည်။ စမတ်စာချုပ်များ။ ၎င်းသည် DNS ကဲ့သို့သောအင်တာနက်စံနှုန်းများနှင့်လည်းပေါင်းစပ်ပြီးဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများနှင့်စမတ်ဖုန်းများတွင်သုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံများကိုတိုက်ရိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။"
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သတိပြုသင့်သည် DeFi World Open Source စီမံကိန်း ဆက်စပ်နေပါတယ် Cryptocurrency အညီအမျှခေါ် ICP (အင်တာနက်ကွန်ပျူတာပရိုတိုကော)။ ဘယ်ဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သနည်း ထိပ်တန်း 10 ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားအသိအမှတ်ပြုသူများ၏ဘေးတွင်ရပ်နေစျေးကွက်အရင်းအနှီးအားဖြင့်အဓိက cryptocurrencies ၏ XRP၊ Dogecoin (DOGE) နှင့် Cardano (ADA)။ တောင်မှ, အချို့သောအခွင့်အလမ်းများကိုအတွက်စတုတ္ထနေရာမှသိမ်းပိုက်ရန် ထိပ်တန်း 10.
ဒီအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုမို delve ရန် DeFi World Open Source စီမံကိန်း ကိုခေါ် "အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ" သငျသညျစူးစမ်းနိုင်ပါတယ် မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (Faq) အပိုင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လုံးဝရသောတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ၎င်းတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ GitHub နှင့်၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Explorer ကိုပိတ်ပါ.
ထိုအခါသင်၌အကြောင်းအနည်းငယ်ပိုစူးစမ်းလေ့လာလိုလျှင် စီမံကိန်း၏ နှင့် cryptocurrency ICP (အင်တာနက်ကွန်ပျူတာပရိုတိုကော) ဆက်နွယ်မှုရှိပါကဤတရား ၀ င်မဟုတ်သောအခြားမည်သည့်လင့်ခ်ကိုမဆိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
link ကို 1 - စပိန်ဘာသာစကား
link ကို2- စပိန်ဘာသာစကား
link ကို3- စပိန်ဘာသာစကား
link ကို4- စပိန်ဘာသာစကား
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Internet Computer (Computador de Internet)»၏စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် open source စုပေါင်းကွန်ပျူတာပလက်ဖောင်း ကတည်ဆောက်ခဲ့သည် DFINITY ဖောင်ဒေးရှင်းယနေ့ရိုးရာအင်တာနက်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောအဓိကပြproblemsနာအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » အင်တာနက်ကွန်ပျူတာ: ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စုပေါင်းတွက်ချက်မှုပလက်ဖောင်း